I-Tud Dret-i-penthouse ngaselwandle nge-WIFI! - I-Airbnb
I-Tud Dret-i-penthouse ngaselwandle nge-WIFI!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBobby-Esther
Indlu entsha entsha kunxweme oluhle lwaseDiante! Le studio enelanga yokuhlala inokuhlala abantu abayi-1-2. Inegumbi lokuhlala elinekhitshi elihle kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa, indlu yangasese & nebidet. Ungonwabela kwi-terrace ebanzi! Le ndlu ikwanendawo yophahla ekwabelwana ngayo kunye neebhedi zelanga, izitulo ezijingayo kunye nembono emangalisayo phezu kolwandle. Okongeziweyo okumnandi kukuba eCasa Tud Dret ungasela amanzi etephu
Le yindawo emangalisayo. Inombono omangalisayo phezu kwezibuko elibukekayo laseSal Rei elinezikhitshane zayo ezincinci ezimibalabala zokuloba. Igumbi elinobunewunewu likunxweme olupholileyo apho abahlali bendawo abathobekileyo baqubha elwandle kwaye bane-BBQ ekupheleni kosuku.
Unokukhetha ukuya kunxweme oluthule kakhulu lwePraia Estoril olukuhambo nje lwemizuzu emihlanu. Igumbi linendawo entle yokutyela kwaye ungasebenzisa indawo entle ephahleni ephangaleleyo owabelana ngayo nabahlali bamanye amagumbi amathathu.
Kwithala ekwabelwana ngalo kule ndawo yokuhlala ungalungiselela izidlo zakho zothando, usebenze kunye nekhompyuter yakho, wabelane ngesiselo kwaye ngaphezu kwakho konke ukonwabele imibala yothando yokusa nokutshona kwelanga.
ICasa Tud Dret ibekwe elunxwemeni lwePraia Diante kwaye kumbindi wedolophu entle yezibuko iSal Rei. Indawo yokufumana umoya opholileyo kunye nobubele benkcubeko yaseCape Verde. Iindawo zokutyela kunye neevenkile zonke zikumgama wokuhamba. Imarike yeentlanzi ezintsha iphantse yajikeleza.
Umbuki zindwendwe ngu- Bobby-Esther
Siza kukwamkela kwisikhululo seenqwelomoya kwaye emva koko sikuzise kwindawo yokuhlala. Xa ufika ndiza kukuxelela kangangoko ndinakho malunga nesiqithi kwaye ndikubonise apho ungafumana khona yonke into.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sal Rei